कहिलेसम्म कायम शेयरधनीले भर्न पाउँछन् एचआईडिसीएलको हकप्रद ? – online arthik
कहिलेसम्म कायम शेयरधनीले भर्न पाउँछन् एचआईडिसीएलको हकप्रद ?
सोमबार, जेठ १७, २०७८ | ११:३८:०४ |
हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडिसीएल)ले हकप्रद निष्काशनको लागु बुक क्लोज मिति तय गरेको छ । कम्पनीले हकप्रद निष्काशनको लागि जेठ २८ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको हो । यस संगै जेठ २७ गतेसम्म कायम शेयरधनीले मात्र हकप्रदमा आवेदन दिन सक्ने छन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले जेठ ९ गते कम्पनीलाई हकप्रद निष्काशनको अनुमति दिएको हो । अब कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजीको १:१ को अनुपातमा ११ अर्ब बराबरको ११ करोड कित्ता हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने छ। शेयर निष्काशनको लागि ग्लोबल आईएमई क्यापिटल बिक्रि प्रबन्धक रहेको छ । कम्पनीले हकप्रद निष्काशनको अनुमति माग गर्दै चैत्र १२ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो ।